News Collection: म पुरुषभन्दा केहीमा पनि कम छैन
म पुरुषभन्दा केहीमा पनि कम छैन
म पुरुषभन्दा कुनै मामलामा पनि कम छैन । म कोही पुरुषसँग हेपिएर, दबिएर बस्न सक्दिनँ । म निर्माता पनि भएकीले अव्यावसायिक र कामप्रति गैरजिम्मेवार व्यक्तिसँग मेरो कुरा मिल्दैन । निखिल उप्रेती, विराज भट्ट हुँदै आर्यन पनि अव्यावसायिक भए ।
अभिनेत्री रेखा थापा अचेल निकै खुसी छिन् रे । उनी खुसी हुनुको मुख्य कारण हो- अन्दाजको सफलता । एकसाथ रिलिज भएका तीन फिल्ममध्ये आफू अभिनीत अन्दाज दर्शकले मन पराएर हिट बनाइदिएका कारण रेखा पुलकित भएकी हुन् । रेखा फिल्मस्, आयुष फिल्मस् र फिल्म वल्र्ड नेपालले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेको अन्दाज दसैँको ताकमा फूलपातीको दिनदेखि मोफसल र विजयादशमीको अर्काे दिनदेखि राजधानीमा प्रदर्शन गरिएको थियो । रेखाले अन्दाजमा स्वाभिमानी सोचकी सहरिया युवती र मुस्ताङकी टुहुरी थकाली युवती गरी दोहोरो भूमिका निभाएकी छिन् ।
अन्दाजको 'रेस्पोन्स' कस्तो पाइरहनुभएको छ ?
एकदमै राम्रो । अन्दाज राजधानी र मोफसलमा गरी चार दर्जनभन्दा बढी हलमा रिलिज भएको छ । मुख्य स्टेसनहरूमा रिलिजदेखि आजसम्म पनि अन्दाजको व्यापार उस्तै छ । आफ्नो फिल्म राम्रो चलेको सबैले दाबी गर्छन् । तर, अन्दाज कत्तिको चलेको छ भन्ने कुरा हलमा पुग्ने जोकोहीले पनि जान्न सक्छ ।
विगतका फिल्मजस्तो अन्दाज राम्रो चलेको छैन भन्ने सुनिन्छ नि ?
त्यस्तो होइन । अन्दाज दर्शकले निकै मन पराएका छन् । हाम्रो फिल्मसँगै लागेका अरू दुई फिल्म र अन्दाजको व्यापारमा आकाश-जमिनको अन्तर छ । अन्दाजले हाम्रा विगतका फिल्मको रेकर्ड तोड्न आँटेको छ । हाम्रो फिल्म चलेन भनेर जो व्यक्तिले हल्ला पिटाउने कोसिस गरेको छ, तिनीहरू आफ्नो फिल्म फ्लप भएकोे चिन्ताले रन्थनिएका छन् । उनीहरू होस गुमेको अवस्थामा बर्बराएका मात्र हुन् । आफ्नो फिल्म फ्लप भए फ्लप भन्न हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन । र, हिट भएको फिल्मलाई हिट भन्न पनि असहज लाग्दैन । तर, यहाँ सुपरफ्लप फिल्मलाई पनि हिट भनेर झुट बोल्नेहरू हाबी हुन खोजेका छन् । कसैले पनि गधालाई गाई भन्नुहुन्न । फ्लप भएपछि फ्लप भन्न के लाज मान्नु ? हामी जे छ त्यही भन्छौँ । हाम्रो फिल्म हिट भएको छ ।
एकैसाथ अन्दाज, मेरो लभ स्टोरी र म तिम्रो भइसकेँ गरी तीन फिल्म रिलिज भएका थिए । दुई फिल्मसँग भिड्नुपर्दा अन्दाजलाई कत्तिको असर पर्‍यो ?
हामीलाई ती फिल्मले कुनै असर पार्न सकेका छैनन् । हाम्रो फिल्ममा दर्शकको भीड अहिले पनि उस्तै छ । हामी आमनेपाली दर्शकका लागि फिल्म बनाउँछौँ । नेपाली दर्शकले के खोज्छन्, त्यो हामीले बुझेका छौँ ।
तपाईंहरूले निर्माण गरेको फिल्म अहिलेसम्म फ्लप नभएको हो ?
हो, हामी आमनेपाली दर्शकको भावनाको कदर गरेर फिल्म बनाउँछौँ । हामी मिहिनेत धेरै गर्छौं । दर्शकलाई मनोरञ्जन दिनका लागि कुनै कुरामा कम्प्रमाइज गर्दैनौँ । हाम्रो ब्यानरले झारेझुरे फिल्म बनाउँदैन भन्ने विश्वास दर्शकको छ । त्यसकारण हामी दर्शक ठग्ने, झुक्याउने काम कहिल्यै गर्दैनौँ । यही कारणले अहिलेसम्म हाम्रो ब्यानरमा बनेको फिल्म असफल भएको छैन । र, मलाई विश्वास छ, आगामी दिनमा पनि सफल नै भइरहनेछौँ ।
मेरो लभ स्टोरीमा तपाइर्ंकै ब्यानरबाट 'ब्रेक' पाएका आर्यन सिग्देल प्रमुख भूमिकामा छन् । आफूले 'ब्रेक' दिएको कलाकारको फिल्म असफल हँुदा तपाईंलाई दुःख लागेको छैन ?
आफूले जन्माएको कलाकार सधैं सफल होस् भन्ने कामना त हुन्छ तर यो सबै व्यक्ति स्वयंमा भर पर्ने कुरा हो । आर्यनको मेरो लभ स्टोरी मात्र होइन, त्यसअघिका फिल्म पनि फ्लप भएका छन् । यसमा मलाई दुःख होइन दया लागेको छ । आर्यनले खेलेका जति पनि फिल्म रिलिज भएका छन्, रेखा फिल्मस्को बाहेक अरू सबै फिल्म असफल भएका छन् ।
आर्यन रेखा फिल्मस्को किस्मत, हिफाजत र कसले चोर्‍यो मेरो मन, तीन फिल्ममा लगातार देखिए । त्यसपछि उनलाई रेखा फिल्मस्ले लिन किन छाड्यो ? विवाद भएको हो ?
विवाद भएको होइन । आफूले जन्माएको कलाकारसँग विवाद गर्ने, इगो राख्ने कुरै हुँदैन । कुनै शिक्षकले आफ्नो विद्यार्थीप्रति इगो राख्छ र ? हामीले उनलाई एकपछि अर्काे गरी निरन्तर लिएका हौँ । उनी हिरो बन्नका लागि वषर्ांैदेखि संघर्ष गरिरहेका थिए । हामीहरूले उनलाई एउटा मात्र चान्स दिएनौँ, लगातार तीनवटा फिल्ममा काम दियौँ । हाम्रो फिल्म हिट भएकाले उनले बाहिरी फिल्ममा बिस्तारै काम पाउन थाले । बाहिरका एक-दुईटा फिल्म हात पर्नेबित्तिकै उनी निकै मात्तिए ।
भनेपछि रेखा फिल्मस्को ब्यानरमा आर्यनको 'रि-इन्ट्री' हुने सम्भावना छैन ?
रेखा फिल्मस्को नजरबाट बाहिरिएको व्यक्तिको 'रि-इन्ट्री' हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ । आर्यनको मामलामा कुरा गर्नुपर्दा यो घोषणा नै हो कि आर्यनलाई रेखा फिल्मस्ले अब कहिल्यै पनि लिने छैन ।
उसो भए अहिले रेखा फिल्मस्को प्यारो हिरो को त ?
प्यारो भनेर प्रतिभाविहीनलाई काखी च्याप्ने काम गदर्ैनौँ हामी । सबै सञ्चारकर्मी तथा दर्शकले अन्दाजमा देखिसकेका छन् कि त्यहाँ एकजना नयाँ प्रतिभाले डेब्यु गरेका छन् । ती हुन्, सविन श्रेष्ठ । रेखा फिल्मस्ले उनलाई अन्दाजलगत्तै रावणमा पनि मौका दिएको छ । सविनको काम दर्शकले मन पराएको प्रमाणित भइसकेको छ । सविनबाहेक कसले चोर्‍यो मेरो मनका किशोर खतिवडा पनि हाम्रो पहिलो रोजाइ र प्राथमिकतामा छन् ।
तपाईंको धेरैजना हिरोसँग पानीबाराबार छ, जस्तो पहिला निखिल उप्रेती, विराज भट्ट हुँदै आएर अहिले आर्यन सिग्देल, खास कारण के हो ?
म २१औँ शताब्दीकी नारी हुँ । म पुरुषभन्दा कुनै मामलामा पनि कम छैन । म कोही पुरुषसँग हेपिएर, दबिएर बस्न सक्दिनँ । म निर्माता पनि भएकीले अव्यावसायिक र कामप्रति गैरजिम्मेवार व्यक्तिसँग मेरो कुरा मिल्दैन । निखिल उप्रेती, विराज भट्ट हुँदै आर्यन पनि अव्यावसायिक भए । उनीहरूले मै ठूलो, मै हिट भन्ने अहंता देखाए । उनीहरूको अहंताप्रति नतमस्तक हुने नारी होइन म । मैले उनीहरूमध्ये केहीलाई आफ्नो फिल्मबाट निकालेँ र कुनैसँग फिल्म खेल्न मानिनँ । त्यसकारण उनीहरूले नै मनमुटाव साँधेका हुन् । मैले इगो राखेकी छैन ।
प्रसंग बदलौँ, नेपाली फिल्म कतिसम्मको बजेटमा बनाउनुपर्छ ?
बजार हेरेर लगानी गर्नुपर्छ । धेरै लगानी गरेर मात्रै राम्रो फिल्म बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । हामीले आमदर्शकको मनोभाव बुझेर त्यहीअनुसारको फिल्म बनाउनुपर्छ । फिल्म पैसाले मात्रै बन्दैन । राम्रो, आमदर्शकले मन पराउने फिल्म बनाउन दर्शकको रुचि बुझ्नुपर्छ । कसले चोर्‍यो मेरो मन हिट भयो तर आमदर्शक हिम्मत, हिफाजत र अन्दाज नै चाहन्छन् । यी फिल्म सत्तरी लाखसम्ममा बन्छन् । मेरो फिल्म निकै एडभान्स्ड छ भनेर डेढ-दुई करोड लगानी गर्नेहरूको फिल्मको ताल देखिएकै छ नि । त्यसकारण समसामयिक परिवेशमा बजारअनुसारको फिल्म बनाउनुपर्छ ।
कस्तो फिल्म दर्शकले मन पराउँदा रहेछन् ?
नेपाली समाजमा भइरहेका घटनालाई फिल्ममा उतार्नुपर्छ । हरेकले फिल्मभित्र आफू र आफ्नो समाज खोज्छ । हामीले बनाएका हरेक फिल्म दर्शकको चाहनाअनुरूपका छन् । त्यसकारण हामी सफल छौँ ।
प्रस्तुति : लक्ष्मण सुवेदी